Moto Morini Kanguro and Dart – Classic Motorcycle Roadtest – RealClassic.co.uk | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
နေအိမ် → Moto Morini → Moto Morini Kanguro and Dart - ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest - RealClassic.co.uk
20 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart
Most people tend to plump for one of the well-known Morini Sport or Strada models. ဒါပေမယ့်စကေး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းမှာသငျသညျ super-ချောမွေ့ပြောင်လက် Dart ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် rufty-tufty Kanguro လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကဲန် Philp နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်မှကြွလာခဲ့ပါဘူး?
ကျွန်မပထမဦးဆုံးအတွက် Earl တရားရုံးမှာ Kanguro ကိုမြင်လျှင် 1982, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုချွတ်-လမ်း V-အမွှာခဲ့သကဲ့သို့သဘောကျခဲ့သည်. ငါအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိခဲ့ 1984, ဒါကြောင့်အများအပြားစက်ဘီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်ဤတဦးတည်းဝယ်ယူတယ်, NLM ဆိုင်ထဲမှာခဲ့သောပထမဦးဆုံး Kanguro.
ငါကမှလိုချင်အခါတိုင်းပဲသွားထားရှိမည်! ဒါဟာချွတ်-လမ်းငါ့ကိုအပျော်အပါးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်, ၎င်း၏အလေးချိန်၏ကြားမှ, ငါ shortie ပေါ့ – 5'' 5. ငါသာထဲမှာဖယ်ရှားပစ်တယ် 2003 ငါသာရှိသည်ကြောင့် 15% အဆုတ်စွမ်းရည်ယခု.
ငါကအကြောင်းကြိုက်နှစ်သက်မဘာမှရှိခဲ့သည်ငါမပြောနိုင်ပါဘူး. ငါအန်ဒူရိုများအတွက်အသုံးပြု, လမ်းကြောင်း-စီးနင်း, Weston သဲသောင်ပြင်လူမျိုး, ခရီးဝေးစမ်းသပ်မှုတွေ, နောက် ... ပြီးတော့, နှင့်တစ်ကြိမ်ဖုံးလွှမ်း 720 မိုင်အတွက် 20 တစ်ဦး MCC ဖြစ်ရပ်အပေါ်နာရီ.
စုစုပေါင်း၌ငါအကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်း 16,000 miles. အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ပြဿနာများရှိခဲ့သည်, ငါ့အမှားခဲ့ကြသည်သောသူတို့ကိုသာ!
တစ်ဦး Kanguro ဝယ်ယူမည်သူမဆိုပထမဦးဆုံးက X-မော်ဒယ်များ၏ရှင်းလင်းသောကိုစောင့်ရမည်. အဆိုပါ X1 နဲ့ X2 tubular ဘောင်များ, လက်ျာ footrest အမှတ်မှာက X ဒါကိုတော့ frame ကို. အဆိုပါ X1 သည်ရှိအားဖြည့်ထားပါတယ်.
အဆိုပါ headlamp သာ AC အတိုက်ရိုက်အလင်းဖြစ်၏, ဒါကြောင့် output ကိုအင်ဂျင်ကိုမြန်နှုန်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်. ဒါဟာအစ 6-ဗို့အလင်းရောင်သည့်စနစ်ရဲ့, အလွန်သေးငယ်တဲ့ဘက်ထရီနှင့်အတူ!
ဒါကြောင့်, အသစ်သောထံမှ Kanguro ပိုင်ဘဲလျက်, ငါတကယ်မော်တာနှင့်အတူအလွန်သဘောကျခဲ့သည်. ထိုအခါအကြှနျုပျသစာနယ်ဇင်းများတွင်သစ်တစ်ခု Dart ၏ဓာတ်ပုံကိုမြင်လျှင်, and wasn’t too impressed – until I saw one close-up at the Earls Court Show in 1998. I positively DROOLED!
2014 Moto Morini Rebello 1200- ပထမဦးစွာမျှော်ဆန်းစစ်ခြင်း- Photos
1975 Moto Morini 3-1/2 အားကစား – ဂန္ထဝင်အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
Retro Ride Moto Morini 500 အမွှာပူး
သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Bajaj Discover ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati 60 Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး AN 650 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Diavel ဟွန်ဒါ DN-01 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Desmosedici GP11 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down